Dib-u-qaabaynta Maamulka - Cabdiraxmaan Cirro - Presidential Candidate- WADDANI-Somaliland
DIB-U-QAABAYNTA MAAMULKA IYO SIYAASADDA (POLITICAL REFORM)
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay samaynaysaa isbeddel siyaasadeed oo qoto-dheer (political reform), iyada oo dhisaysa dawlad u shaqaysa hab daah-furan (open Government) isla-markaana ay caddaaladdu u tahay udub-dhexaad siyaasadeed, dhismaheeda iyo hawl-galkeedaba oo hal-ku-dheggeedu yahay caddaalad. Waxa kale oo ay mudnaan siinaysaa xoojinta tayada hay’adaha dawliga ah iyo dadka oo hela adeegyo hufan.
DASTUURKA iyo KORRIINKA QAABKA SIYAASADEED EE DALKA
Dib-u-eegista iyo qabyo-tirka Dastuurka qaranka,iyada oo la gufaynayo goldaloolada, la qeexayo meelaha mugdigu ku jiro, loona diyaariyo in uu si buuxda ugu adeego xaqiijinta himilada qarannimo ee shacbiga Somaliland iyo dhismaha habka dimuqraadiga ee wadatashiga.
Wax-ka-beddelka Dastuurka Qarankawaxa loo mari doonaa hababka dastuurka ee ku cad qodobbada 126aad ee “wax-ka-beddelka iyo kaabidda Dastuurka” iyo ka 127aad ee “Xuduudaha wax-ka-beddelka iyo kaabidda dastuurka”.
Magacaabidda Guddida dib-u- eegista Dastuurkaoo ka kooban dad aqoon leh, magac iyo aamminaadna ku dhex leh bulshada, kuwaas oo si miisaaman ay uga muuqdaan qaybaha kala duwan ee bulshada Jamhuuriyadda Somaliland. Guddidaasu waxay eegaysaa kana talo-bixinaysaa sidii Dastuurku ula jaan-qaadayo geeddi-socodka habka dimuqraadiga wada-tashiga iyo korriinka xukunka iyo dawaldnimada Somaliland.
Hirgelinta xeerka kootada haweenkaoo guud ahaan ah 30% golayaasha Wakiilada iyo Degaanka kaas oo ay taabba-gelinayso doorashada u horaysa ee ay Xukuumadda Xisbiga WADDANI qabato.
Hirgelinta barnaamij u gaar ah bulshooyinka dulmanoo kor loogu qaadayo noloshooda dhaqaale, lagu sugayo caddaaladda ka qaybgalkooda golayaasha siyaasadda iyo la dagaalanka quudhsiga oo xeer ku salaysan.
Ku-dhaqanka buuxa ee kala-madax-bannaanida, is-kaabidda iyo is-ilaalinta saddexda dhardhaar ee dawladdu ka kooban taahay (Fulinta, Xeer-dejinta iyo Garsoorka).
Dejinta xeerka doorashada Golaha Guurtidaee Dastuurku waajibiyey.
Xaqiijinta madax-bannaanida Garsoorkaiyada oo kor loo qaadayo miisaaniyadda ay Waaxdu u baahan tahay loona madax-bannaynayo.
Dhammays-tirka xeerarka muhiimka ahee dhiman iyo kuwa maamulka waaxaha dawliga ah.
Sii-xoojinta xukun-daaddejinta dastuuriga ahiyada oo la xoojinayo awoodna la siinayo degaamaynta xukunka, si muwaadin walba xaqiisa u helo, waajibkiisana u guto.
Hirgelinta dhabta ah ee xorriyadaha asaasiga ahee Dastuurku u asteeyey muwaaddinka iyo xaaraamaynta xorriyad-ka-qaadka aan si buuxda loogu marin waddada sharcigu jideeyey.
La DagaallankaQabyaaladda: Samaynta Komishanka la Dagaallanka Qabyaaladda iyo saamaynta ay ku leedahay hab-dhaqanka dawladda iyo jiilalka soo koraya.
Samaynta tiro-koob qaraniyo habka diiwaangelinta madaniga oo dhammaystiran.
MAAMULKA MAALIYADDA IYO XISAABAADKA:
Korriinka Miisaaniyadda iyo Maal-gelinta Horumarka:
Xukuuumadda Waddani waxay laban-laabaysaa miisaaniyadda halka ay maanta joogto (ku-dhowaad 250 Milyan) iyada oo gaadhsiineysaa muddo-xileedka hore Nus Bilyan iyadoo isku-cel-celin sannadkii ay soo bixi karto Laba bilyan iyo badh Dollar (USD 2.5 Billion). Halka dakhligu ka imanayaa ma noqonayo cashuura la kordhiyey ee waa iyada oo hagaag loo maamulo dakhliga cashuurta iyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka sida: shidaalka iyo macdanta, adeegga iyo saamiga isticmaalka dekadaha iyo madaarrada, maal-gashiga dadka gaarka ah iyo dawladdu wada leeyihiin iyo sanaaduuqda horumarinta deeqaha caalamka.
Xukuumadda WADDANI waxay horumarka u qoondaynaysaa 30% dakhligaas, kaas oo lagu hir-gelinayo horumarinta: Biyaha, Waxbarashada, Caafimaadka, Kaabayaasha dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka iyo guud ahaanba korriinka awoodda hay’adaha dawladda iyo xoojinta caddaaladda iyo dimuqraadiyadda wada tashiga ku dhisan.
Xukuumadda WADDANI waxay ku tallaabsan doontaa:
Dib-u-habaynta buuxda ee hab-xisaabeedka iyo maamulka Maaliyadda dawladda
Diyaarinta iyo samaynta miisaaniyadda oo laga dhigo mid daah-furan talo-soo-jeedinna ay ku yeelan karaan daneeyeyaasha muhiimka ah ee gobollada iyo bulshada rayidka ah.
Dejinta qiimaha doollarka heehaabaya ee keenay sicir-bararka oo maalinba maalinta ka sii danbeysa sii adkaynaysa nolosha danyarta iyo dadka ku nool dakhliga xaddidan.
Awood-dhiska hay’adaha maaliyadda si ay u adeegsadaan ICT-ga iyo habka casriga ee &#8216;Public Financial Management’.
U-xaq-sooridda bulshdada iyo gobollada ee miisaaniyadda iyo mashaariicda horumarineed.
Adeegsiga hab-xisaabeed casri ah oo elektorooni ah si loo kaydiyo xogta loona daah-furo hab-xisaabeedka iyo agabka ay dawladdu iibsato.
Xoojinta iyo tayeynta Xafiiska Hanti-dhawrka Guud.
Khudbadda dastuuriga ah ee sannadlaha ahi waxay jihaynaysaa higsiga horumarineed iyo qorshaha maaliyadeed ee sannadkaas.
TAYEYNTA HAY’ADAHA DAWLADDA EE MADAXA-BANNAAN
Xukuumadda WADDANI waxay ku tallabsan doontaa:
Samaynta hal-beeg wax-qabad oo aad u sarreeya, hufnaan maamul iyo ka suulinta eexda iyo qaraabo-kiilka hay’adaha ay ka midka yihiin: Bangiga Dhexe, Iibka Qaranka, Maamulka Dekedaha, Wakaaladaha Biyaha, Hay’adda Madbacadda Qaranka, Hay’dda Waddooyinka iyo Komishannada kala duwan ee dawladda miisaaniyaddeeda ku jira.
Xoojinta xeerarka lagu maamulo hay’adaha madaxa-bannaan loona sahlo la- xisaabtankooda iyo daah-furnaanta shaqadooda iyo wax-qabadkoodaba.
Dhiirri-gelinta hay’adaha wadaagga ah ee dadka iyo dawladda iyada oo loo samaynayo xeerar sugan, iyo golayaal (board) madax-bannaan halkii looga
Qiimaynta sannadlaha ah ee hawsha ay u igmanyihiin
Hirgelinta u-dulqaad-la’aanta buuxda (zero tollerance) ee musuqmaasuqa, eexda iyo qaraabo-kiilka.
TAYEYNTA IYO DARYEELKA SHAQAALAHA DAWLADDA
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay mudnaan buuxda siin doontaa sidii ay isbedel baaxad leh ugu samayn lahayd sida dawladdu dadka ugu adeegto. Xisbiga WADDANI wuxuu aaminsanyahay in aan hadda sida ay dawaddu u shaqayso aan horumar lagu gaadhi karayn, waayo shaqaalaha dawladda looma diyaarin xirfad ahaan iyo awood ahaan toonna in ay hawshaa ka midho-dhaliyaan. Waxa loo baahanyahay is-beddel qoto-dheer oo awoodda shaqaalaha lagu koriyo si uu ula jaan-qaado is-beddelka horumarineed ee ay Xukuumadda WADDANI higsanayso.
Korhdinta mushaharka shaqaalaha dawladda iyo ciidamada iyo awoodaynta Hay’adda Shaqaalaha Dawladda iyo Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada sidii ay u samayn lahaayeen hab-raaca sidii ay mushaharka iyo gunnooyinka shaqaalaha iyo ciidamadu si joogti ah ula jaanqaadi lahaayeen isbeddelka maciishadda.
Reebbanaanta in aan shaqaalaha dawladda iyo ciidamdu marnaba ku milmin siyaasadda xisbiyadda, ee u hawl-galaan sidii “Adeegayaal Qaran” (civil servants).
Shaqo-qorista oo ah hab daah-furan oo si buuxda looga baahiyo warbaahinta kala duwan, mar walbana laguna kala helo tartan xor, oo hab madax-bannaan dib loogu qiimayn karo haddii muran caqli-gal ahi ka yimaaddo.
Sugidda in shaqaaluhu ku dallaco, lagu casilo ama lagaga eryo shaqada sababo la xidhiidha wax-qabadkooda iyo sharciga oo la mariyo keliya ee marnaba aanay sal ku yeelan qaraabo-kiil, eex iyo siyaasad midnaba.
Korriinta joogtada ah ee awoodda shaqo ee qof walba oo shaqaalaha dawladda ah, iyada oo barnaamij horumar goobta shaqo loogu samaynayo wadar iyo qofba.
Unkidda barnaamij uu qofka shaqaaluhu si sharaf leh hawl-gab joogto ah ku helayo.
Hirgelinta sharciga in jawiga shaqadu ahaado mid caafimaad iyo badbaado leh oo qof walb oo shaqaale ah xaqiisu sugan yahay.
Hirgelinta sidii qofka shaqaalaha ahi ku heli lahaa caymis lagu dammaanad-qaado daawayntiisa iyo haddii dhawac shaqada kaga yimaaddo.
Soo-rogidda heshiiska shaqada ee ay wada-gelayaan qofka shaqaalaha ah iyo dawladda oo ah loo shaqeeye, kaas oo qeexaya mushahar u qalma shaqadaas, gunnooyinka iyo xuquuqda kale ee qofka shaqaaluhu ku leeyahay loo shaqeeyaha; dhinaca kalena, wuxu heshiisku u qeexaya si tifaf-tiran awoodaha, shaqada iyo waajibaadka uu fulinayo qofka shaqaalaha ahi, kuwaas oo marwalba lagula xisaabtamayo.
Soo-rogidda ku-xisaabtanka saacadaha shaqada iyada wakhtiga laga lumiyay shaqada dawladda sabab la’aan uu la mid noqonayo xatooyo xoolo ummadeed, xisaabtankiisana uu yeelanayo.
Dib-u-eegista iyo dhaqan-gelinta Xeerka Shaqaalaha Jamhuuriyadda Somaliland.
XUKUN-WANAAGGA IYO ISLA-XISAABTANKA
Sugidda in doorashooyinku xor iyo xalaal noqdaan, wakhtigoodana ku dhacaan, isla markaana ay xukuumaddu xil-qaaddo miisaaniyadda ku baxaysa oo dhan.
Samaynta xafiis madax-bannaan oo si fudud dadweynuhu u gaadhi karaan ugana ashkatoon karaan hay’daha iyo madaxda dawladda (Ombudsman).
Ilaalinta hantida ma-guuraanka ah ee qaranka. Waxay daba-gelaysaa tirada, tayada iyo halkii hanti wal oo dawladeedba ku danbaysay gobol iyo caasimadba. Waxay tallaabo shuruucda dalka waafaqsan ka qaadi doontaa sidii loo sugi lahaa sharaciyadda hantida la wareejiyay.
CIDHIBTIRKA MUSUQMAASUQA, EEXDA IYO QARAABO-KIILKA (Zero-Tollerance)
Cidhib-tirka aafada musuq-maasuqa maamul, eexda, qabyaaladda, laaluuska iyo xatooyada xoolaha ummadda iyada oo la dejinayo xeer lagu xakamanayo aafadaas, isla markaana sharciga lala tiigsnayo ka qaata, ka bixiya iyo ka dillaalaba ama fududeeya. Waxa la mid ah musuq-maasuqa nidaamka doorashada, sida iibka iyo iibsiga codaynta; laaluska shaqaalaha doorashada iyo wax-isweydaarinta tirada codbixinta iyo ku dhawaaqisteedaba.
Samaynta ‘Komishanka Qaranka ee la Dagaalanka Qabyaaladda’.
Soo-saarista hab-raac lagaga hortegayo musuq-maasuqa oo lagu wacyi-geliyo dadweynaha iyo hawl-wadeennada dawladdaba.
Dhiirri-gelinta iyo taageerada buuxda ee dedaallada iyo hal-abuurka cusub ee ay dhallinyaradu kula dagaallamayaan aafada
Tir-tirista hab-dhaqanka musuq-maasuqa min xagga u hoosaysa ilaa madaxa sare wixii awood dawladeed ku adeegta ama shacab ha ahaado ama dirays ha sito. Waxa sidaa loo samaynayaa iyada oo la soo hubiyay in musuqmaasuqu uu dabar ku yahay horu-marka iyo tayeynta dawladnimada.
Is-beddel ku-samaynta hay’adaha mas’uulka ka ah ilaalinta denbiga musuqmaasuqa iyo maamulka gurracan sida: Hantidhawrka, Booliiska, Maxkamadaha iwm.
Hirgelinta xoriyadda daah-furnaanta warka iyo madax-bannaanida warbaahinta.
Hirgelinta daah-furnaanta iyo xalaalnimda bixinta qandaraasyada dawladda iyo hawl-galka hay’adda Iibka Qaranka. Si arrintaa loo xaqiijiyo waxaannu samaynaynaa xarun–online ah (Portal) oo warka qandaraaska intaan la bixin, intuu socdo iyo marka uu dhammaado macluumaadkiisa si furan looga heli karo.
Ku-xakamaynta musuqa xeer u qaar,
Badbaadinta iyo dhiirri-gelinta dadka sheega xatooyo xoolaha ummadda, qaraabo-kiilka iyo noocyada musuqa ee qarsoon.
Ka-dabo-tagga hantida ummadda ee hore loo lunsaday gudo iyo dibedba.
Adkaynta xoriyadda saxaafadda iyo dimuqraadiyeynta warbaahinta qaranka.
In si daah-furan loo maamulo bixinta liisammada hay’adaha warbaahinta loona sameeyo ha-braac lagu qiimeeyo dalbadaha.
In la daraasadeeyo sidii xuquuqda warbihinta, dad iyo hay’ad, iyo ta xuquuqda bulshadaba loo ilaalin lahaa, adeeg hufanna ay u bixn lahayeen.
In la fasaxo Raadyowyada madax-bannaan.
Soo saarista xeerka xorriyadda war-helidda iyo ilaalinta xogta gaarka ah.
ADEEGSIGA TIKNOOLAJIYADA EE MAAMULKA (E-Government):
Hirgelinta barnaamij muddaysan oo hay’ad walba oo dawladeed ay qasab ku tahay in ay dhammaan hawshoodu ku socdaan habka ‘Internetka’ iyo qalabka elektrooniga ah ee khaaska u ah adeeggeeda (hardware and software), taas oo isla markaana fududaynaysa wada-shaqeynta iyo kala-xadeynta hay’adaha dawladda.
Samaynta Mareego (Websites) dadku ka helaan warka adeegga hay’adaha dawladda, kagalana xidhiidhi karaan maamulka wasaaradaha iyo hay’adaha madaxa-bannaan si ay u fududaato bixinta adeeggu.
Mudnaan-siinta baahinta adeegsiga ellektrooniga hay’adaha maaliyadda oo dhan si xisaabtanku u daah-furnaado, kaydintuna u sugnaato.
Adeegsiga qalabka elektroniga iyo is-gaadhsiinta in musuq-maasuqa la gula dagaallamo laguna ilaaliyo hantida qaranka.
Fududeynta dadku in ay helaan xeerarka dalka lana socdaan siyaasadda dawladda.
Hirgelinta Qodobbada Dastuurka 110aad, 111aad, 112aad iyo dib-u-eegidda xeerarka jira sida Xeerka 23aad iyo 12aad,
Baahinta maamulka si uu adeeggu u qaadho bulshooyinka Jamhuuriyadda Somaliland oo dhan; iyo daadijinta Maamulka hay’adaha dowladda ilaa heer degmo, si uu muwaaddinku u heli karo adeegga uu u baahanyahay isagoo meeshiisa jooga.
Xoojinta madax-bannaanida iyo isku-fillaanshaha Golayaasha Degaanka, iyada oo lagu dhisayo awooddooda: tababar joogta ah, kaalmo dhaqaale iyo farsamo si loo gaadhsiiyo in ay gudan karaan xilalkooda dastuuriga ah una siiyaan bulshadii soo dooratay adeeg tayo leh.
Dib-u-eegidda kabka Dawladda Dhexe ay siiso Dawladaha Hoose iyada oo tix-gelin gaar ahna la siiyo kuwa awooddoodu hooseyso.
Ku-talo-galka dhaqaale gaar ah iyo kaalmo gobollada Sool iyo Sanaag-bari la siiyo si adeegyada loogu fidiyo horumarkoodana la kaabo.
Dib-u-noolaynta degmooyinka xeebaha si loo gaadhsiiyo adeeg maamul iyo bulshoba, dhaqaalahoodana loo kobciyo.
Furista doodo ku aaddan wax-ka-bedelka maamulka dhulka la deggan yahay, iyada oo cilmiyeysan sida looga hawl-gelayo maamulidda dhulka magaalooyinka.
U adeegsiga idaacadda qaranka (FM) ee gobollada iyo degmooyinka dalka, si dadweynaha loogu gudbiyo wacyi-gelinta nabadda, ilaalinta degaanka, wada noolaanshaha bulsho iyo ku dhaqanka sharciga.
Ujeeddada dawladda hoose loo sameeyey waa in adeegga asaasiga ah loo dhoweeyo dadka. Dawladda hoose waa wejigii hore ee xukunka dimuqraaddiga hoos-u-daaddejintiisa kaas oo ah inuu u dhega-nuglaado baahiyaha dadka.
Dib u eegista xeer 23aad ee Golayaasha Degaanka iyo sidii qodaxda looga guri lahaa soo-xulista iyo habka doorashada xildhibaannada Golaha Degaanka.
Dib-u-habaynta hab-dhismeedka dawladda hoose degmo iyo tuuloba, si dadku u helaan adeegga ay xaqa u leeyihiin oo hufan kuna filan.
Xoojinta awoodda farsamo iyo dhaqaale ee dawladaha hoose sidii ay u fulin lahaayeen xilka iyo adeegga bulshada ee Dastuurku u asteeyey.
Daah-furidda hawsha iyo qorshaha dawladda hoose si loo abuuro habkii dadku ula xisaabtami lahaayeen madaxda iyo hawl-wadeennadeeda iyada oo la qorshaynayo shirar muddaysan iyo doodo warbaahinta ahba oo arrintaa lagu fuliyo.
Dib-u-eegista hab-raaca dawladda Hoose ee dhulka bixintiisa iyo sharciyeyntiisa, iyada oo la daah-furayo habkaas, lana fududaynayo sida loola xisaabtami karo waaxyaha iyo hawl-wadeennada dawladaa hoose ee dhulka maamula.
Samaynta xafiiska Nootayada Guud (Public Notary) oo ka masuul noqonaya sugidda sharciyadda hantida maguuraanka ah iyo kaydinta dukumentiga qandaraasyada dawladda iwm.
Wacyi-gelinta dadka doortay Golayaasha Degaanka, si ay ula xisaabtamaan xildhibaannadooda iyo inay helaan awood ay dadku kaga qayb-galaan samaynta miisaaniyadda iyo qorshe- sannadeedka dakhliga iyo horumarka oo laga baxo sida hadda jirta.
La-dagaallanka musuq-maasuqa, eexda iyo qaraabo-kiilka lana nadiifiyo habka maamulka ee guud ahaanba aafoobay.
Ku taageeridda Dawladda Hoose hirgelinta suuqyo cusub oo gaar ahaan ganacsatada soo koraysaa ay fursad ka hesho.
Xoghyaha dawladda Hoose waxa lagu soo xulayaa habka tartanka aqoonta iyo khibradda qofka.
Xukuumadda Xisbiga WADDANI waxay dood u furaysaa daweynaha si loo hirgeliyo Axdi-qarameed Xuquuqda iyo Xoriyadaha muwaaddiniinta dadka. Waxay hirgelinaysaa xuquuqda bulshooyinka dulman iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Waxay dib u habaynaysaa Waaxda Garsoorka, madax-bannaanideedana xoojinaysaa.
Sugidda hirgelinta awoodda iyo madaxbannaanida Maxkamadda Sare, tan Dastuuriga iyo guud ahaanba Garsoorka.
Madax-bannaanaynta Waaxda Dambi-baadhista iyada oo la tayayn doono shaqaalaha lana adeegsan doono qalabka iyo aqoonta casriga ah ee dambiyada lagu baadho.
Kor-u-qaadista awoodda adeeg-bixinta Waaxda Garsoorka iyada oo tababar joogto ah, xoojin iyo madax-bannaani dhaqaale lagu kobcinayo.
Qiimaynta hawl-qabadka iyo tayada garsoorayaasha iyo shaqaalaha caddaaladda.
U-gondo-degga sidii la isu waafajin lahaa adeegsiga iyo is-kaabidda xeerarka dhaqanka iyo ka maxkamadaha Jamhuuriyadda Somaliland, isla markaana culayska raagista dacwadaha loo yareyn lahaa. Taasu waxay xaqiijinaysaa sidii aanay hawl-galka maxkamadaha iyo caddaaladdu u noqon wax danyartu ka maagto.
Gargaarka dhinaca sharciga (legal aid clinics) ee dadka aan dhaqaale ahaan u awoodin.
Kala-dagaallanka Waaxda Garsooraka musuq-maasuqa iyo eexda,
Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah waa in ay yeeshaan heerka takhasuska aqoonta iyo waaya-aragnimada sharciga dastuuriga ah (Constitutional Law).
Soo celinaysaa isticmaalka habka xeer-beegtida madaxa bannaan (Jury) ee kiisaska Maxkamadaha ka qayb-qaata si loo sugo caddaaladda.
Sugitaanka shaqada Garsoorayaasha (job security) iyo karaamayntooda.
Xisbiga WADDANI wuxuu aaminsan yahay in golayaasha xeer dejintu yihiin rukunka ugu muhiimsan ku dhaqanka habka dimuqraadiga iyo wada tashiga. Sidaa awgeed Xukuumadda WADDANI waxay xaqiijin doontaa kala madaxbannaanta iyo isu-dheelli-tirka nidaamka dastuuriga ah ee aynu qaadannay.
Fulinta shuruudaha doorashada iyo xubinnimada Golayaasha Xeer Dejinta sida Dastuurku u asteeyey.
In Xeerarka Gaboobay la waafajiyo korriinka
Dhawrista karaamada iyo xasaanadda xubnaha Golayaasha Xeer Dejinta.
Sugidda madax-bannaanida iyo kor-u-qaadidda miisaaniyadda Golayaasha Xeer Dejinta.
Is-kaashiga hufan ee diyaarinta iyo hir-gelinta xeerarka dalku u baahan yahay ee ay leeyihiin Waaxda Fulinta.
Fududeynta isku-xidhnaanshaha xildhibannada iyo bulshadii soo doortay sida in ay xafiisyo ku yeeshaan gobolladii laga soo doortay.
Isbeddel Siyaasadeed oo mug leh
Isbeddel Siyaasadeed: Hirrgelinta isbeddel Siyaasadeed oo dhinac walba saameeya dawladda (poitical reform).
Magacaabista iyo hawl-gelinta Guddida dib-u-eegista Dastuurka,
Xoojinta Wasaaradaha iyo waaxayaha kale ee dawladda si loo tayeeyo adeegyada dawladdu bixiso.
Maaliyadda: hagaajinta hab-maamulka maaliyadda iyo xisaabta dawladda.
Shaqaalaha: Daryeelka shaqaalaha dalwladda iyo tayeynta hawl-qabadkooda.
Dawladaha Hoose: Tayeyenta adeegga iyo dhismaha dawladaha hoose.
Hay’adaha madaxa-bannaan: dhamaystirka xeerarka haya’adaha madaxa-bannaan; tayeynta iyo daah-furnaanta shaqadooda.
Xukun-daadejinta: degaamaynta xukunka ee dastuuriga ah iyo dimuqraaddiyadda.
Maamul Wanaagga: Cidhib-tirka musuq-maasuqa iyo qaraabo-kiilka, iyada oo la xoojinayo hay’adaha ka hortagga dembiyada iyo kuwa Maamul-wanaagga.
Garsoorka: Dib-u-habaynta Waaxda Garsoorka iyo bixinta adeeg caddaaladeed oo tayo leh, dadkuna wada gaadhi karo.
Haweenka: Meel-marinta Kotaha Haweenka 30% xeerdejnta iyo fulintaba.
Xeerdejinta: Dhamaystirka xeerarka doorashooyinka golayaasha Xeer-dejinta iyo hirgelinta awoodaha Dastuuriga ah ee ay leeyihiin.
Bulshada dulman: Ilaalinta xuquuqal insaanka qaybaha bulshada dulman sida dadka laxaadka la’ iyo beelaha dulman oo xeer iyo barnaamijba lagu hirgeliyo.